Showing posts with label ၀တ္ထုတိုများ. Show all posts
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, July 10, 2012 Tuesday, July 10, 2012 Labels: ၀တ္ထုတိုများ
သူမမှာ ရှိသည့် အကျင့်တစ်ခုက ညနေတိုင်း ဒီမြစ်ဆိပ်က ကျောက်တုံးကြီးတွေပေါ်ထိုင်ရင်း မြစ် တစ်ဖက်ကမ်းက ရှုခင်းတွေကို ငေးမောကြည့်ရှုတတ်သလို မြစ်ပြင်ကိုဖြတ်ပြီး တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေညှင်းရဲ့ ပွေ့ဖက်မှုကိုလည်း ခံယူတာကို သူမက နှစ်သက်လှပါသည်။ မြစ်ပြင်မှာ လှိုင်းကြက်ခွပ် ကလေးတွေ ထနေတာ နေရောင်ရဲ့ ရွှေအဆင်းနဲ့ ထိအတွေ့မှာ ရောင်ပြန်လက်ရင်း တစ်ဖျတ်ဖျတ် တောက်ပနေပုံက ညနေခင်း ဆည်းဆာအောက်မှာ သိပ်ကိုလှပတဲ့ ပန်းချီကားလေးတစ်ချပ်လိုပါဘဲ။ နှစ်သက်ဖွယ် ကောင်းလွန်း လှပါသည်။ ရှုခင်းတွေကြည့်၍ ဝလျှင်တော့ ပါလာသည့် ဖတ်စရာ စာအုပ်တစ်အုပ်ပို ထုတ်ကာ ဖတ်နေတတ်သည်။ စဉ်စားကြည့်ပါ။ ညနေခင်းမှာ လေပြေတစ်လွှင့်လွှင့် တိုက်ခတ်နေချိန်တွင် စာအုပ်လေး ဖတ်နေရတဲ့ အရသာသည် ဘယ်လောက်များ ဇိမ်ကျဖို့ ကောင်းမည် ဆိုတာ။ ယခုလည်း သူမတွင်ပါလာသော စာအုပ်လေးကို ဖတ်နေရာမှ မျက်စိညောင်းလာသဖြင့်မြစ်ပြင် ရှုခင်းတွေဘက် ပြန်ပြီး အကြည့် ရောက်သွားမိသည်။
သည်စဉ်မှာဘဲ သူမ မြင်ကွင်းထဲ ၀င်လာတာက မြစ်တစ်ဘက်ကမ်းကနေ အသက် ၁၂နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးတစ်ယောက် မြစ်ရေပြင်ကို ဖြတ်ကူးလာတာဘဲ ဖြစ်သည်။ သည်မြစ်ရေက အချို့နေရာများတွင် လူကူး၍ ရနိုင်လောက်အောင် ယောက်ျား ပေါင်ရင်းနားလောက်ထိ တိမ်သော နေရာ ရှိသည်။ သို့သော် လမ်းကြောင်းတော့ ကျွမ်းကျင်ရမည်။ မဟုတ်လျှင် လူတစ်ရပ်မြုပ်သည့်နေရာသို့ ရောက်သွားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်သေးသည်။ ယခု မြစ်ကို ဖြတ်ကူးလာသော ကလေးမလေး ကြည့်ရသည်မှာ သည်မြစ်ကို ကူးနေကျလား မသိ။ သူ့မှာ ဘာအပူအပင်မှ မရှိသလို အေးအေးဆေးဆေး အနေအထားမျိုးနှင့် တစ်ဖြေးဖြေး ကူးလာခြင်းဖြစ်သည်။ သူမစိတ်ထဲတွင်တော့ လူကြီး တစ်ယောက်ယောက် မပါဘဲ ကလေးချည်းဘဲ မဖြတ်စေချင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အော်ဟစ်တားမြစ်လိုက်ဖို့ စိတ်ကူး ရလိုက်မိသော်လည်း “သူ.. ကူးနေကျ ဖြစ်မှာပါလေ” ဟု စိတ်ကို ပြန်လျှော့ချလိုက်ကာ သူမတွင် ပါလာသော စာအုပ်ကလေးကို ပြန်ဖတ်နေလိုက်တော့သည်။
သို့သော် သူမစိတ်က မဖြောင့်.. စာထဲ စိတ်မရောက်နိုင်ဘဲ မြစ်ကို ဖြတ်ကူးနေသော ကလေးမလေး အတွက် စိတ်က ပူနေမိသဖြင့် မကြာမကြာ လှမ်းကြည့်နေမိသည်။ တတိယအကြိမ်မြောက် သူမ ကြည့်မိလိုက်စဉ်တွင် ကလေးမလေးမှာ ရေနစ်နေသည်ကို သူမ လှမ်းတွေ့လိုက်ရသည်။ ခေါင်းပင် မပေါ်တော့ဘဲ လက်နှစ်ဖက်သာ ဖော်နိုင်ပြီး မြုပ်ချည်ပေါ်ချည် ဖြစ်နေလေပြီ။ သူမ လက်ထဲက စာအုပ်ကို ပစ်ချလိုက်ပြီး ဘေးဝန်းကျင်ကို အကူအညီ တောင်းနိုင်ဖို့ လှမ်းကြည့်မိသော်လည်း လူရိပ်လူခြေ မမြင်ရဘဲ တိတ်ဆိတ်နေသော ဝန်းကျင်သာ သူမအနီးတစ်ဝိုက် ရှိနေလေသည်။ ရေကူးတတ်သော သူမက ထိုကလေးမလေးဆီ ကူးခတ်သွားဖို့ လွယ်အိတ်နှင့် ဖိနပ်ကို ချွတ်ပစ်လိုက်စဉ် လှေကလေးတစ်စင်းက ရေနစ်နေသော ကလေးမလေးဆီ တစ်ရွေ့ရွေ့ လှော်ခတ်သွားနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် အသာ ကိုယ်ရှိန်သတ်ကာ ကမ်းပေါ်ကနေသာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်ကြည့်နေလိုက်မိသည်။ လှေသမားသည် ရေနစ်နေသူ ကောင်မလေးနှင့် မလှမ်းမကမ်း ရောက်ချိန်တွင် လှေလှော်ခြင်းကို ရပ်လိုက်ကာ လှော်တက်ကို လှမ်းပေးလိုက်လေသည်။
ရေနစ်နေသော ကလေးမလေးမှာ ခေါင်းပင်မပေါ်သဖြင့် သူ့လှော်တက်ကို မြင်ဟန်မတူသလို လှော်တက်ကိုလည်း လှမ်းကိုင်နိုင်သည့် အသိစိတ်လည်း ရှိဟန်မတူ။ သို့သော်လည်း လှေပေါ်က လှေသမားကတော့ ရေထဲဆင်းဖို့ စိတ်မကူးဘဲ လှော်တက်ကိုသာ တွင်တွင် ပေးနေလေသည်။ ကြည့်နေရင်း ဒေါသတွေ တနုံ့နုံ့ထွက်လာရသော သူမသည် “ရေထဲဆင်းဆယ်လိုက်ပါလား” ဟု အော်လိုက်သော်လည်း လှေသမားက မကြားသည်လား၊ မကြားဟန်ပြုနေသည်လားတော့ မပြောတတ် မြုပ်ချည်ပေါ်ချည် ဖြစ်နေသော ကလေးမလေးအား သူ့လှော်တက်ကိုသာ အတွင်သား ကမ်းပေးနေလေတော့သည်။
ကြည့်နေရင်း အခြေအနေ မဟန်တော့တာကို ရိပ်မိလိုက်သော သူမက ရေထဲကို ခုန်ဆင်းလိုက်ပြီး ရေနစ်နေသော ကလေးမလေး ရှိရာကို အားသွန် ကူးခတ်မိတော့သည်။ ကလေးမလေးဆီရောက်ဖို့ အနည်းငယ် အကွာအဝေးသာ လိုတော့ချိန်တွင် ကလေးမလေးမှာ ရေပြင်ပေါ် လုံးလုံးပေါ်မလာတော့ပါ။ ထိုအချိန်အထိ လှေသမားသည် လှေပေါ်မှနေ၍ လှော်တက်ကြီး ကိုင်ရက်သား ကြောင်ပြီး ရပ်ကြည့်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူမ သွေးရူးသွေးတန်းဖြင့် ပိုပြီးအားစိုက်ကာ ကူးခတ်ရင်း “ မနှစ်သွားပါနဲ့ဦး ကလေးရယ်… ငါမင်းဆီကို ရောက်အောင်လာနေတယ်.. ငါ့ကို ခဏလောက်တော့ စောင့်ပါဦး။ ငါ မင်းကိုကယ်မှာပါ ” ဟု တတွတ်တွတ် ရေရွတ်နေမိသလို လက်တွေ ခြေထောက်တွေကလည်း သူမဘ၀တွင် အမြန်ဆုံးသော နှုန်းထားနှင့် ကူးခတ် လှုပ်ရှားနေမိတော့သည်။
သို့သော်လည်း ကလေးမလေး ရေနစ်နေသည့်နေရာ ရောက်သည့်အခါတွင်လည်း ကလေးမလေးအား လုံးဝ ရှာမတွေ့တော့ပါ။ ပေါ်မလာတော့သော ကလေးမလေးအား တွေ့လိုတွေ့ငြား အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ရေငုတ်ကာ ရှာဖွေနေမိသလို၊ ခပ်လှမ်းကိုများ မျောပါသွားလေမည်လား ဟူ၍လည်း တွေးတောရင်း ထိုနေရာတစ်ဝိုက်တွင် ထက်အောက် စုံခြည်ဆန်ခြည် ရေငုပ်ရင်း ထပ်ခါထပ်ခါ ရှာဖွေနေမိတော့သည်။ ကလေးမလေး ရေနစ်သော နေရာသည် သူမအရပ်နှင့်ဆိုလျှင် ရင်ဘတ်လောက် ရှိသော နေရာ ဖြစ်လေသည်။ ခပ်နောက်နောက် မြစ်ရေကလည်း ကလေးမလေးကို အလွယ်တကူ မတွေ့နိုင်အောင် ဖုံးကွယ်ပေးထားသလို ဖြစ်နေရလေသည်။ ကြည့်ရသည်မှာ ကလေးမလေးသည် ရေကူးရင်း လမ်းကြောင်း လွဲသွားတာ ဖြစ်နိုင်လေသည်။ အချိန်အတော်လေးကြာတော့ ရေငုပ်ရလွန်း၍ သူမ မျက်စိတွေ နီရဲ ကျိန်းစပ်လာသလို၊ နားတွေလဲ အူကာ နာကျင်ရတော့ချိန်တွင်မှ သူမ ရေငုပ်တာ ရပ်လိုက်တော့ လှေပေါ်တွင် ခုချိန်ထိ အရုပ်တစ်ခုလို ရှိနေသေးသော လှေသမားကို မြင်လိုက်မိချိန်တွင် သူမဒေါသတွေ ပေါက်ကွဲသွားတော့သည်။
“မင်းအသုံးမကျလို့ ဒီကလေးသေရတာ မင်းရဲ့အဝတ်တွေက ဒီကလေးလအသက်ထက် ပိုပြီး တန်ဖိုးလကြီးနေလို့လား အသုံးမကျတဲ့ကောင် သေသင့်တာက မင်း ”ဟု သူမက လှေသမားကို ပက်ပက်လစက်စက် ဒေါသတကြီး ပြောလိုက်မိပါတော့သည်။ သို့သော် လှေသမားကတော့ သူ ရေမကူးတတ်တဲ့လအတွက် ရေထဲဆင်း မဆယ်ရဲတာဖြစ်ကြောင်း သူမကို လေသံ ပျော့ပျော့နဲ့ ပြန်ပြီး ပြောလာပါသည်။ ဒေါသ ထွက်လွန်းနေသော သူမက “ရေမကူးတတ်ရင်လည်း လှေပေါ်ကနေ ကလေးမလေးရဲ့ လက်ကို လှမ်းကိုင်ပြီး ဆွဲတင်လိုက်ရင် ရတာပဲ ဒါမှ မရရင် ရေထဲဆင်းပြီး လက်တစ်ဘက်က လှေ ကို ကိုင် ကျန်လက်တစ်ဘက်က ကလေးမလေးကို အသာတွဲထားပြီး လှေပေါ်ကို ဖြေးဖြေးချင်း တွန်းတင်ပေးလိုက်ရင် ဖြစ်တာဘဲ မဟုတ်လား ရေက ကလေးအတွက် နက်ပေမဲ့ လူကြီးအတွက်တော့ ရင်ဘတ်အထိဘဲရှိတာ။ ရေနစ်ပြီး မသေနိုင်ပါဘူး။ မင်း သတ္တိ မရှိရင် ဘာဖြစ်လို့ ဒီနားထိ လာခဲ့သေးလဲ မင်းလှေကို တွေ့လိုက်လို့ ငါလည်း ရေထဲဆင်းဖို့ နှောင့်နှေးသွားခဲ့ရတာ။ ဒါ မဖြစ်သင့်ဘဲ ဖြစ်သွားရတာ မသေသင့်ဘဲ သေသွားရတာ” သူမသည် အဆက်မပြတ် အရူးတစ်ယောက်လို အော်ဟစ် နေမိပါတော့သည်။
မကြာခင်တွင်တော့ အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို တစ်စုံတစ်ယောက်က လှမ်းမြင်သောကြောင့် အခြား သူများအား သွားရောက် ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပုံရသည်။ ဆိပ်ကမ်းအနီး တစ်ဝိုက်မှ လူများ ဝိုင်းအုံရောက်ရှိလာကာ ယောက်ျားကြီး တစ်ချို့ ရေထဲ ဆင်း၍ ကလေးမလေးအား ဝိုင်းပြီး ရှာဖွေကြလေတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် လှေသမားမှာ လူတွေ အများကြီးရောက်သဖြင့် သူမ က သူ့အကြောင်းကို လူတွေသိအောင် ပြောမှာ စိုး၍လား၊ သူ့ကိုယ်သူ လိပ်ပြာ မလုံတော့၍လားတော့ မသိပါ။ လှေကလေးကို လှော်ခတ်ကာ ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်လေသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်လည်း ထိုလှေသမား လုံးဝ ပြန်ပေါ်မလာတော့ပါ။ နောက်ထပ် နာရီဝက်လောက် ကြာတော့မှ ကလေးမလေး ကို သူနှစ်မြုပ်သွားသော နေရာလေးနှင့် မနီးမဝေးမှာဘဲ လူကြီးတစ်ယောက်က သွားတွေ့ပါသည်။ ကလေးမလေးသည် နွံ ထဲတွင် နှစ်မြုပ်သွားခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် သူ၏အလောင်းကို နွံတွေကြားထဲမှာ မြုပ်နေတာကို ပြန်တွေ့လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးမလေးအား ကမ်းပေါ် ခေါ်တင်လာကြကာ အသက်ရှင်လို ရှင်ငြား ရေများ အန်ထွက်အောင် ဝိုင်းဝန်း ပြုစုကြပါသည်။ သို့သော် ကလေးမလေးကတော့ ပြန်လည် နိုးထမလာတော့ပါ။
သူမသည်လည်း ကလေးမလေးကို ပြန်တွေ့ပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ကမ်းပေါ်သို့ နှေးကွေး လေးလံစွာ ပြန်လည်ကူးခပ် လာခဲ့သည်။ ကလေးမလေး အလောင်းနားကိုလည်း သွားမကြည့် ဖြစ်တော့ပါ။ ထို မြင်ကွင်းကို ကြည့်ဖို့လည်း သူမ အားမရှိသလို ကြည့်လည်း မကြည့်ချင်ပါ၊ ကြည့်လည်းမကြည့်ရက်ပါ။ မိမိ မျက်စိရှေ့မှာတင် အသက်ဆုံးရှုံးသွားသူ တစ်ဦးကို ကြည့်ဖို့လည်း သူမစိတ်က လုံခြုံမှု မရှိသလို ခံစားနေရသည်။ မျက်စိ ရှေ့မှောက်မှာဘဲ အသက်ရှင်ဖို့ အတွက် အတင်း ကြိုးစားရုန်းကန်ရင်း နှစ်မြုပ် သေဆုံးသွားခဲ့ရသော ကလေးမလေး၏ ပုံရိပ်က သူမ ရင်ကို ဆို့နင့်စွာ နာကျင်ခံစားနေရသည်။
တော်ပါသေးသည်။ ကမ်းစပ်မှာထားခဲ့သော သူမအိတ်နှင့် လွယ်အိတ်ကလေးမှာ ဒီအတိုင်းသာ ရှိနေသေးသည်။ သူမ၏ အိတ်ကို ကောက်လွယ်လိုက်ကာ ဖိနပ်စီးလိုက်ချိန်တွင်တော့ သူမ တစ်ကိုယ်လုံး ခြစ်ခြစ်တောက် ပူနေသည့် အသိကို ခံစားလိုက်ရသည်။ သူမ ဖျားနေပြီ။ ရေထဲတွင် ဘယ်လောက် ကြာသွားသည်ကို သူမကိုယ်တိုင် မစဉ်းစားမိသလို အမှတ်လည်း မထားမိနိုင်လောက်အောင် ပူလောင် စိုးရိမ်စိတ်တို့ဖြင့် ပြာယာခတ်နေခဲ့မိသည်။ သို့သော် ကလေးမလေး သေဆုံးရမှုတွင် သူမကိုယ်တိုင် အပြစ်ကင်းပါရဲ့လားဟု ပြန်တွေးမိတော့ ရင်ထဲ နာကျင်မွန်းကြပ် လို့လာသည်။
ရေနစ်နစ်ခြင်းသာ သူမ ကူးခတ်သွားကာ ကယ်လိုက်လျှင် ကလေးမလေး ဒီလို အဖြစ်ဆိုးနှင့် ကြုံမည် မထင်ချေ။ လှေသမားကိုမြင်လိုက်၍ ရပ်ကြည့်နေလိုက်သော သူမတွင်လည်း ကလေးမလေး အသက် ဆုံးရှုံးရမှုအတွက် တာဝန်ရှိသလို ခံစားနေမိပြန်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ရီမူးဝေလာသော ကြောင့် သူမကိုယ်သူမ အသာထိန်းလိုက်ရင်း အားတင်းကာ ဆိုင်ကယ်ကို စက်နိုး၍ ဆိပ်ကမ်းမှ ထွက်ခွာလာတော့ ဆိုင်ကယ်မောင်းသည့် အရှိန်နှင့် တိုက်လာသော လေအေးအေးက သူမရင်ကို မအေးမြစေနိုင်တော့ပါ။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ခြစ်ခြစ်တောက်အောင် ပူလောင်ရင်း သူမရင်ထဲမှာလည်း ဆုံးရှုံးသွားသော အသက်တစ်ချောင်းအတွက် ပူလောင်သော ခံစားချက်များဖြင့် ငိုကြွေးနေမိပါတော့သည်။
လှေသမားတော့ ဘယ်လိုခံစားရမည်မသိ။ သူမကတော့ လိပ်ပြာမလုံသလို၊ အပြစ်မကင်းသလို ခံစားနေရသော သည်မြင်ကွင်းကို ဘယ်အချိန် ဘယ်ကာလ ကြာသည့်တိုင်အောင် သူမ မေ့နိုင်မည် မထင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မဆိုစလောက်သော နှောင့်နှေး လေးကန်မှုလေး တစ်ခုက လူ တစ်ယောက်၏ အသက်ကိုပင် ဆုံးရှုံးသွားစေတတ်ကြောင်း သူမ သိလိုက်ရပါပြီ။ နောင်များတွင်တော့ တစ်စုံတစ်ယောက် အန္တရာယ်နှင့် တွေ့ကြုံရသည်ကို သိရှိပါက မဆိုင်းမတွ ကူညီနိုင်ဖို့ ကြိုးစားမည်ဟုလည်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချမိပါသည်။ လူတစ်ယောက် သူမမျက်စိရှေ့မှောက်တွင် အသက်ဆုံးရှုံးသွားသည့် မြင်ကွင်းမျိုးလည်း ဘယ်သောအခါမှ ထပ်မံ မမြင်တွေ့လိုပါဟု သူမ ရင်ထဲက ဆုတောင်းလိုက်မိပါတော့သည်။
ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က အခြားဘလောဂ့်တစ်ခုမှာ ရေးခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုလေးပါ။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, April 25, 2012 Wednesday, April 25, 2012 Labels: ၀တ္ထုတိုများ
ပြောရဦးမယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ရွာက ကောင်မလေး တစ်ယောက်အကြောင်းပေါ့၊ အတင်းပြောတာတော့ မဟုတ်ရပါဗျာ။ စပ်မိစပ်ရာ ပြောတဲ့သဘောပါ။
အဲဒီကောင်မလေးနံမည်က လှအုန်းမယ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ သိပ်ချောတဲ့ ကောင်မလေးပေါ့ဗျာ.. ကွမ်းတောင်ကိုင်လေး ဆိုပါတော့။ ရွာက ကာလသားတွေများ သည်းသည်းကိုလှုပ်လို့။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်လည်းပါသလား ဆိုတော့ ဟဲဟဲ ဒါတော့ လှတပတ ကောင်မလေးဘဲဗျာ မကြိုက်ဘဲနေမလား ပါတာပေါ့ဗျ.. ဘယ်နေလိမ့်မတုန်း။ အဲဒီ လှအုန်းမယ်လေးက ဘယ်သူနဲ့တူသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရွာက ဗွီဒီယိုရုံမှာ ခနခန ပြတတ်တဲ့ ဟို ဗီဒီယိုသမီးလေ.. ဘယ်သူပါလိမ့်.. နံမည်က ခပ်မေ့မေ့။ လှအုန်းမယ်ရဲ့ ရုပ်ရည်က အဲဒီ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလေးနဲ့ တူသဗျ။ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ အဲဒီ မင်းသမီးကို ကြိုက်တဲ့သူ သိပ်များတာ။ နောက်ထပ် တူတာတစ်ခုက အဲဒီမင်းသမီးလေးက သိပ်လှချင်တာ။ ပြီးတော့လည်း အဲဒီမင်းသမီးက သိပ်စွာတယ်။ ကက်ကက်လန်အောင် ပြန်ပြောတတ်တယ် လို့လည်း ကြားဖူးတယ်။ လှအုန်းမယ်ကလဲ အပြင်မှာ စွာကျယ်မ.. ဆတ်ဆတ်ကြဲ.. ရွာက ကာလသားတွေ သူ့ကို ကြိုက်ပေမဲ့ သူ့ပါးစပ်ကိုလန့်တယ်။ ဘယ်သူကမှ အနား မကပ်ရဲဘူး.. လှအုန်းမယ်ကလည်း သူ့ကိုယ်သူ ဗီဒီယိုမင်းသမီးနဲ့တူတယ် ဆိုတာသိတော့ ဘ၀င်က မြင့်တယ်။ သူနဲ့ တူတယ် တန်တယ်ဆိုတဲ့သူ ရွာမှာ မရှိတော့ဘူးမှတ်တာ။
ဒီလိုနဲ့ ရွာမှာ စုပေါင်းရှင်ပြုပွဲ ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ စုပေါင်းရှင်ပြုပွဲဆိုတဲ့အတိုင်း ရွာနီးချုပ်စပ်က ရှင်လောင်းပေါင်းများစွာ စုပေါင်းပြီး ပြုကြမှာဆိုတော့ ခြိမ့်ခြိမ့်သည်းပေါ့.. ဇာတ်တောင်မှ နံမည်ကြီး ဖိုးချစ်ဇာတ်ကို ငှားတာ။ တစ်ရွာလုံးလဲ တက်တက်ကြွကြွ၊ ကာလသားတွေကလဲ ရှင်ပြုမဏ္ဍပ်တွေဆောက်၊ ရွာထဲက အလှူ့ရှင်တွေနဲ့ လူကြီးတွေကလဲ အလှူအတွက် လိုအပ်တာတွေ ဝယ်ကြဖို့ မြို့ကိုတက်ကြ၊ အပျိုအုပ်စုကလဲ အလှူမှာ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးမဲ့ အသင်းတွေ ဖွဲ့ကြ၊ တာဝန်တွေ ခွဲကြနဲ့ တစ်ရွာလုံး ဘယ်သူမှ မအားရပါဘူး။ အလှူအတွက် ၀ိုင်းဝန်းနေကြတာ။ ကျွန်တော်တို့ ရွာမှာ ထုံးစံက အလှူလှည့်တဲ့နေ့မှာ အချောဆုံး အပျို ၂၄ယောက်ကို ပရိတ်အိုး ကိုင်ခိုင်းရတယ်။ ပရိတ်အိုးတစ်လုံးစီမှာ ဟေတုပစ္စယော၊ အရမဏပစ္စယော စသဖြင့် ၂၄ ပစ္စယောကို ပရိတ်အိုးလုပ်တဲ့ မြေအိုး ခပ်ရွယ်ရွယ်မှာ တစ်အိုးမှာ ပစ္စယော တစ်လုံးစီ ရေးထားတယ်။ ၂၄ပစ္စယောဆိုတော့ အိုး၂၄လုံးပေါ။ အိုးထဲမှာ ချည်လုံးတစ်လုံးရယ် သပြေခက်၊ အုန်းရွက်၊ ဒန်းရွက် စတာတွေ ပါတယ်.. အဲလို အလှူလှည့်တဲ့နေ့မှာ ပရိတ်အိုးကိုင် ရှေ့ဆုံးကောင်မလေးက လှအုန်းမယ်ပေါ့ဗျာ။ သူက အချောဆုံးဆိုတော့ ရှေ့ဆုံးက ကိုင်ရတာပေါ့လေ။
လှအုန်းမယ်က လှပြီးသားပေမဲ့ သူများနဲ့ မတူအောင် လှချင်သူဖြစ်လေတော့ ဒီတစ်ခေါက် အလှူမှာ ထူးထူးခြားခြား ဒေါက်မြှင့်ဖိနပ်လေးနဲ့ဗျ။ သိပ်မကြာခင်က ဗွီဒီယိုတစ်ကားမှာ အဲဒီမင်းသမီး စီးသွားတဲ့ ဖိနပ်ဆိုလား။ အလှူအတွက် မြို့တက်ပြီး ဈေးသွားဝယ်တဲ့အဖွဲ့ကို လှအုန်းမယ်က မှာလိုက်တာလို့ ကြားမိတယ်။ ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ဆိုတော့ ကြည့်ရတာ ပိုတောင်လှနေတယ်လို့ ထင်မိသေး။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက ဒေါက်ဖိနပ်ကို သူက စီးကျင့်မရှိဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရွာက လမ်းတွေကလဲ မြို့မှာလို ကတ္တရာလို့ခေါ်တဲ့ မဲမဲကြီးတွေ ခင်းထားတဲ့လမ်းတွေ မဟုတ်ဘူးဗျာ။ မြေလမ်း ကြမ်းကြမ်းပေါ်မှာ ကျောက်ခဲနဲ့ ချိုင့်တွေနဲ့။ စီးကျင့်မရှိတဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ ကျောက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ ချိုင့်တွေအပြည်နဲ့လမ်းဆိုတော့ သူလမ်းလျှောက်တာက ဟိုဘက်ယိုင်လိုက် ဒီဘက်ယိုင်လိုက်နဲ့.. ကြည့်ရတာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါဘူးဗျာ။ အလှူလှည့်တာကို ဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကလည်း လှအုန်းမယ်အဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး ပြုံးစိစိနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူကမှတော့ အသံထွက်အောင် မရယ်ရဲဘူး.. သူ့ပါးစပ်ကို ကြောက်ကြတယ်လေ..
ဒီလိုနဲ့ ရွာလည်ပိုင်း လူစည်ကားတဲ့နေရာရောက်လာလေ လှအုန်းမယ်ရဲ့ဒေါက်ဖိနပ်က အခြေအနေ ဆိုးလေ။ ကြည့်ရတာ တစ်ခါမှ မစီးဖူးလို့ ခြေချော်နေပုံရတဲ့အပြင်၊ လမ်းကဆိုး၊ ဖိနပ်ပေါက်တဲ့ ဒဏ်ပါ ခံရပြီထင်ပါရဲ့။ ယိုင်နဲ့နဲ့ လမ်းလျှောက်နေရပါတယ်ဆို လူတွေကလဲ သူ့ကိုကြည့်ပြီး ပြုံးစိစိဆိုတော့ လှအုန်းမယ်လည်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်းပေါ့.. ဒီချိန်မှာဘဲ လမ်းပေါ်မှာ ပြန့်ကြဲနေတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲလေး တစ်တုံးကို လှအုန်းမယ်ရဲ့ ခြေထောက်က တက်နင်းမိပြီးသကာလ ခေါက်ခနဲဖြစ်ပြီး လဲကျသွားပါရောဗျာ။ ချော်လဲကျသွားတော့ လှအုန်းမယ် လက်နဲ့ပိုက်ထားတဲ့ ပရိတ်အိုးကလည်း မြေပြင်ပေါ်လွှတ်ကျပြီး ခွမ်းခနဲဆို နှစ်ခြမ်း ကွဲပါလေရော။ နဂိုက သူလှမ်းလျှောက်ပုံကို ကြည့်ပြီး ပြုံးစိစိဖြစ်နေကြတဲ့ ရွာကလူတွေနဲ့ အလှူလှည့်ရာမှာ ပါဝင်ကြတဲ့သူ အားလုံးဟာ ဘယ်လိုမှ အိနြေ္ဒမဆည်နိုင်တော့ဘဲ မပြုံးဘဲ ၀ါးလုံးကွဲ ၀ိုင်းရယ်ကြပါတော့တယ်။ လှအုန်းမယ်လေး ချော်လဲတော့ သူ့ကို ကြိုက်နေတဲ့ ရွာက ကာလသား ကိုလူအေးက မျက်နှာလိုအားရ အပြေးသွားပြီး သွားဆွဲထူရာမှာ ရှက်လဲရှက်၊ ဒေါသတွေလည်း ထွက်နေတဲ့ လှအုန်းမယ်က ရှက်ရှက်နဲ့ လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်လိုက်တာက လာဆွဲထူတဲ့ ကိုလူအေးကို သူ့ရှေ့က အိုးခြမ်းကွဲနဲ့ ကောက်ထုလိုက်တာမှာ ကိုလူအေး ခေါင်းကွဲပါလေရော။ လှအုန်းမယ်ရဲ့ ဒေါသကို ထည့်မတွက်မိဘဲ စေတနာပိုမိတဲ့ ကိုလူအေးရဲ့အဖြစ်က ထိပ်ပေါက်ခေါင်းကွဲ ဖြစ်ရရှာပါတယ်။
အဖြစ်ကတော့ အဲဒီလိုပါဘဲဗျာ.. ကျွန်တော်တို့ ရွာအလှူအကြောင်းပြောတိုင်း လှအုန်းမယ်နဲ့ ကိုလူအေးရဲ့ အကြောင်းက မပါမပြီးပေါ့.. စေတနာကောင်းလို့ ခေါင်းကွဲသွားတဲ့ ကိုလူအေးကို အကြောင်းပြုပြီး တစ်ယောက်ယောက်ကို စေတနာပိုနေရင် "သတိထား ကိုလူအေးလို ဖြစ်မယ်နော် " လို့ ရွာမှာ ပြောစမှတ် ပြုကြသလို အလှူမှာ လှချင်လွန်းအားကြီးလွန်းလို့ ရွာရဲ့ လမ်းနဲ့ သင့်မသင့် ထည့်မတွက်မိဘဲ ဒေါက်ဖိနပ်စီးမိတာကြောင့် ချော်လဲပြီး ပရိတ်အိုး ကျကွဲတဲ့ လှအုန်းမယ်ကို အဲဒီနေ့ကစလို့ တစ်ရွာလုံးက လှအိုးကွဲ ရယ်လို့ နံမည်ပေးလိုက်ကြတယ်ဗျာ။ လှတပတ ချောချောမောမော ရွာရဲ့ကွမ်းတောင်ကိုင်ကလေးဟာ အလှမက်ပြီး ဒေါက်မြှင့်ဖိနပ်ကို အကျင့်မရှိဘဲ စီးမိတဲ့ အတွက် လူပုံလယ်မှာ အရှက်ကွဲရသလို၊ နံမည်ရင်းပျောက်ပြီး လှအိုးကွဲ လို့ အမည်တွင်သွား ရတာသာ ကြည့်တော့ဗျာ။ လှချင်တာ တစ်ခုတည်း ကြည့်လို့မဖြစ်ဘဲ ကိုယ့်အရပ်နဲ့ ကိုယ့်ဇာတ် တန်မတန်၊ သင့်မသင့်လဲ ကြည့်ဖို့လိုသေးတာကိုးဗျ။ သိပ်လှချင်တဲ့ မိန်းခလေးတွေကို တွေ့ရင် ပြောလိုက်ပါဗျာ.. ကိုယ်နဲ့ လိုက်မလိုက်၊ ကိုယ်နေရာဒေသနဲ့ ကိုက်ညီ မကိုက်ညီ အရင်ကြည့်ပါဦးလို့။ တော်ကြာမှ ကျွန်တော်တို့ရွာက လှအုန်းမယ်လိုတော့ လှအိုးကွဲလို့ နာမည်တွင်သွားပါဦးမယ်။ အတင်းပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး.. စပ်မိစပ်ရာ ပြောတဲ့သဘောပါဗျာ :P :P
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Friday, March 23, 2012 Friday, March 23, 2012 Labels: ၀တ္ထုတိုများ
လူတိုင်း လူတိုင်းမှာတော့ စိတ်မကြည်မသာ ဖြစ်တဲ့အချိန်၊ စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်၊ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အချိန်တွေ၊ ၀မ်းနည်း နာကျင်နေတဲ့ အချိန်တွေ တစ်ခါမဟုတ် တစ်ခါတော့ ရှိတတ်ကြမှာဘဲနော်.. အဲဒီအချိန်တွေကို ဘယ်လိုများ ကျော်ဖြတ် ကြပါသလဲ၊ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကျော်ဖြတ်ပုံ၊ ရင်ဆိုင်ကြပုံချင်းတော့ တူကြမယ် မထင်ပါဘူး။ တစ်ချို့ကျတော့ စိတ်ဓာတ်ကျရင်၊ ၀မ်းနည်းနာကျင်ရင် ငိုကြွေးကြတယ်။ အချို့က မိမိမိတ်ဆွေ၊ မိဘ မောင်နှမဆီ ရင်ဖွင့် ပြောပြကြတယ်။ အချို့ကျတော့လည်း စိတ်ခွန်အားဖြစ်မဲ့ စာတွေ၊ စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေမဲ့ အဆုံးအမ တရားစာတွေ ဖတ်ကြတယ်။ တရားထိုင်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ သီချင်းတွေ အော်ဟစ် သီဆို တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ညစ်နွမ်းချိန်ကို ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းပုံချင်း မတူညီကြ တာတော့ သေချာလှပါတယ်။
သက်ထား စိတ်ညစ်ရင်၊ စိတ် မကြည်မသာဖြစ်ရင် အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ ရှုခင်းတွေ တမျှော် တစ်ခေါ်ကြီး ကို ငေးမောလို့ ရနိုင်မဲ့ ၊ အချိန်အကြာကြီး ကိုယ့်စိတ်အာရုံတွေကို အဆုံးမရှိ လွတ်ပေးလိုက်လို့ ရတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ထိုင်နေရတာကို သဘောကျ နှစ်သက်မိတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဖုန်းတွေကို ပိတ်ချင် ပိတ်ထားမယ်။ ပြင်ပ အဆက် အသွယ်တွေ အကုန်ဖြတ်တောက်လို့ ကိုယ်မသိ၊ ကိုယ်မရင်းနှီးတဲ့ မျက်စိ တစ်ဆုံး မြင်နေရတဲ့ တောင်တန်း ကြီးတွေပေါ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အဝေးဆုံးထိ စိတ်ကို ဖြန့်ကျက်လို့ ခရီးနှင်ရတာက သက်ထားရဲ့ စိတ်အာရုံကို ပြန် လည် လန်းဆန်းလာအောင်၊ စိတ်တွေ ပြန်လည် တည်ငြိမ် လာအောင် ကုစားတဲ့နည်းတစ်မျိုးပါဘဲ။ အဲဒီချိန်မျိုးမှာ အိမ်ထဲမှာ နေနေတာထက် စာရင် အိမ်ပြင်ပကို ထွက်ပြီး လန်းဆန်း သန့်စင်တဲ့ လေပြေနုထွေး အေးအေးလေးရဲ့ အပွေ့အဖက်ကို ခံယူလို့ ကြည်လင်လှပတဲ့ ရှုခင်းလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ပြီ ဆိုရင် သက်ထားမှာရှိနေတဲ့ သောက စိတ်တွေ အနည်းနဲ့ အများတော့ အေးချမ်းသွားတတ်ပါတယ်။
ဒီညနေလဲ တစ်စုံတစ်ရာသော အကြောင်းကြောင့် နောက်ကျိ ညစ်နွမ်းနေတဲ့၊ ၀မ်းနည်းပင်ပန်းနေတဲ့ စိတ် အာရုံတွေကို ဆေးကြောဖို့ ထိုင်နေကျ နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြစ်ဆိပ်ကမ်းဘေးက တာရိုးလေးကို သက်ထား တစ်ယောက်တည်း ထွက်လာခဲ့မိပါတယ်။ တာရိုးလေးက မြစ်ရေမကျော်အောင် မြေဖို့ထားတဲ့ နေရာပေမဲ့ ကား သွားလို့ရတဲ့အထိ လမ်းအကျယ်ရှိပြီးတော့ တာရိုးတစ်လျှောက်ကိုလည်း အုတ်တံတိုင်း ကာထားပါတယ်။ အုတ်တံတိုင်း ဆိုပေမဲ့လို့ အလုံပိတ်တံတိုင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ အကွက်ကျဲကျဲ ကာထားတဲ့ အရံအတားသဘောမျိုးပါဘဲ။ တံတိုင်းနဲ့ကပ်ရပ်မှာ ထိုင်စရာ ကွန်ကရိ ခုံကလေးများ ခပ်ကျဲကျဲ ရှိနေပြီး တာရိုးပေါ်က လမ်းကလေးကတော့ ကတ္တရာ ခင်းထားတဲ့ လမ်းကလေးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရိပ်ရ အပင်တွေကို အရွယ်ညီညီ စီရီလှပစွာ လမ်းဘေးဝဲယာ စိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ သစ်ရွက်စိမ်းတို့ရဲ့ ရနံ့ကလည်း စိတ်ကိုလ တ်ဆတ် ကြည်မြစေနိုင်တယ် မဟုတ်ပါလား။ တာရိုးမှာတော့ စိမ်းလန်းစိုပြေနေတဲ့ မြက်ခင်းပြင် ကျယ်ကြီးနဲ့အတူ ပြုပြင်ထားတဲ့ အရွယ်မျိုးစုံ၊ အပင်မျိုးစုံတို့ကို စံနစ် တကျ စိုက်ပျိုး ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အပန်းဖြေစရာနေရာ ရှိပါတယ်။ ပန်းခြံလို့ခေါ်ချင်ပေမဲ့ အပွင့်ပွင့်တဲ့ ပန်းပင်ဆိုလို့ စက္ကူပန်းပင်ကလွဲလို့ ကျန်တာအားလုံးက စိမ်းစိမ်းစိုစို အရွက်ဖားဖား အပင်ကြီး၊ အပင်လတ်တွေ ဖြစ် တာကြောင့် ပန်းခြံလို့လဲ ခေါ်ဖို့ခက်ပါတယ်။ မြို့နေလူထု အပန်းဖြေနားနေစရာ ဆိုတာကမှ ပိုပြီး လိုက်ဖက်ပါတယ်။
အဲဒီ အနားယူစရာ နေရာရဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အောက်မှာ သဘာဝ ကျောက်တုံးကြီးတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ စားပွဲကြီးတွေ၊ လူတွေ ထိုင်စရာ ကျောက်ခုံတွေ ရှိပါတယ်.. နေ့ခင်း နေ့လည်ဆိုရင် အနားယူသူများ၊ မင်္ဂလာဆောင် အလှဓာတ်ပုံ ရိုက်ကြသူများ၊ ပျော်ပွဲစားထွက်သူများ ရှိနေတတ်ပြီး ညနေခင်းဆိုရင်တော့ လမ်းလျှောက်လာသူများ၊ ကားနဲ့လာပြီး မိသားစုလိုက် အပန်းဖြေ လေကောင်း လေသန့် ရှုကြသူ များနဲ့ မြက်ခင်းပြင်ကြီးမှာရော တာရိုး တစ်လျှောက်မှာပါ စည်ကားလှပါတယ်။ အစား အသောက် ရောင်း ချတဲ့ ဆိုင်ကလေးများလည်း ရှိနေတာကြောင့် အပန်းဖြေလာသူများအတွက် အဆင်ပြေလှပါတယ်။ သက်ထားကတော့ မြစ်ပြင်ကို ဖြတ်သန်းပြီး တိုက်ခတ် လာတတ်တဲ့ လေပြေ အေးအေး စိမ့်စိမ့် လေးတွေရယ် ဟိုးအဝေးမှာ အဆုံးမရှိ မြင်နေရတဲ့ တောင်ပြာတန်း ကြီးတွေရဲ့ ညှို့ယူဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းတဲ့ အလှအပ ရယ်ကြောင့် ဒီနေရာလေးကို အလွန် သဘောကျမိ တာပါ ဘဲ။ တွေးချင်တိုင်း တွေး၊ ငေးချင်တိုင်း ငေးလို့ ကောင်း တဲ့ နေရာလေး တစ်ခုဘဲ မဟုတ်လား။
ခုလဲ တံတိုင်းနားက ထိုင်ခုံတစ်ခုပေါ်ထိုင်ပြီး ဟိုးဝေးဝေးက ဆင့်ကာဆင့်ကာ စီရီလှပစွာ ရှိနေတဲ့ ပြာရီ မှိုင်းမှိုင်း တောင် တံတိုင်းတွေကို ကျော်ဖြတ်လို့ သက်ထားရဲ့စိတ်တွေ ရွက်လွှင့်ချင်တိုင်း လွှင့်သွားနေ တဲ့ အချိန်မှာ အနီးနားမှာ ကပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ အသံတစ်ခုကြောင့် စိတ်နဲ့ကိုယ် ပြန်တွဲမိရက် သား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီလို စိတ်တွေ ရွက်လွှင့်သွားလိုက်မိတာ ဘယ်လောက်တောင် ကြာပြီလဲဆိုတာ သတိမထားလိုက်မိပေမဲ့ မြစ်ပြင် က လေအေးကြောင့် အင်္ကျီလက်တို ဝတ်ထားတဲ့ သက်ထားရဲ့ လက်မောင်း တစ်လျှောက် လုံးတော့ အေးစက်နေ ခဲ့ပါပြီ။ အသံကြားရာကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ အသက် ၇ဝကျော် ၈ဝနီးပါး အဖိုးအဖွား စုံတွဲတစ်တွဲ။ အဖိုးအိုက တောင်ဝှေးလေးကို တစ်ဘက်က ကိုင်ထားရင်း လက်တစ်ဘက်က အဖွားအိုရဲ့ လက်ကလေးတွေကို ဖေးမတွဲကူလို့။ အဖွားအိုရဲ့ လက်တွေကလဲ အဖိုးရဲ့ လက်ပေါ်မှာ အားကိုးတကြီး ဆုပ်ကိုင်လို့။ ကြည့်ရတာ နဲ့တင် ကြည်နူးစရာ ကောင်းနေပြီ။ ကြားလိုက်ရတဲ့ အဖိုးအိုရဲ့ အကြင်နာမေတ္တာ အပြည့်နဲ့ အသံကရော သက်ထားရဲ့ အာရုံတွေကို ဆွဲယူသွားခဲ့တာဘဲမဟုတ်လား။ အဖိုးအိုက အဖွားကို ပြောတဲ့စကားက “အဖွားကြီးရေ.. မောနေပြီလား.။ ဖြေးဖြေးလျှောက်နော်.. ထိုင်စရာခုံ တွေ့ရင် ခဏလောက် နားရအောင်.. ရေရော ဆာနေပြီလား.. ထိုင်မဲ့နေရာကျရင် အိတ်ထဲက ရေ တိုက်မယ်နော်” တဲ့။. အဖွားကို ကြည့်ရတာ အနည်းငယ်တော့ မောပန်းနေပုံ ရပါတယ်။
တာရိုးတစ်လျှောက် သက်ထား လိုက်ကြည့်တော့ လူတွေက အတော်များနေတယ်။ ပြီးတော့ ထိုင်ဖို့လုပ်ပေးထားတဲ့ ခုံတွေကလဲ နေရာလွတ် မကျန်တော့အောင် လူတွေအပြည့် ရှိနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် စုံတွဲကလေးတွေက ပိုမိုများပြားပါတယ်။ ဒီတော့ မနေနိုင်တဲ့သက်ထားက ကိုယ်လက်ရှိ ထိုင်နေတဲ့ ကွန်ကရိ ခုံကလေးကနေ ထလိုက်ပြီး “အဖိုးနဲ့အဖွား ဒီမှာ ခနလောက်နားပါလား။ သမီး ဒီဘေးက အုတ်တံတိုင်းပေါ် ထိုင်လိုက်မယ်လေ” လို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အုတ်တံတိုင်းရဲ့ အမြင့်က ခါးလောက်ရှိတာမို့ အဖိုးအဖွားတို့ အတွက် အဆင် မပြေနိုင်ပေမဲ့ သက်ထားအတွက်တော့ ထိုင်လို့ အဆင်ပြေတာကြောင့် ခုံနေရာလေး ဖယ်ပေးပြီး အနီးနားက အုတ်တံတိုင်းပေါ် တက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ သူမ ကလည်း အိမ်မပြန်ချင်သေးဘူး မဟုတ်လား။
ခုံကလေးပေါ် ထိုင်လိုက်တဲ့ အဖိုးအဖွားတို့ကိုကြည့်ရင်း ဘာရယ်မသိတဲ့ ခံစားချက်လေးတွေနဲ့ စိတ်ဝင်တစား ငေးကြည့်နေမိပါတယ်။ အဖိုးအိုက သူလွယ်လာတဲ့ အိတ်ကလေး ထဲက ရေဘူးလေးတစ်ခု ကို ထုတ်လိုက်ပြီး အဖွားကို တိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖွားက ငြင်းလိုက်ပြီး အဖိုးကို “အရင် သောက်ပါ” လို့ ပြော လိုက်တော့မှ အဖိုးအိုက ခပ်ပြုံးပြုံးလေး နဲ့ ရေကို မော့သောက်လိုက်ပြီး အဖွားဘက်ကို ပြန်ပေးလိုက်တော့မှ အဖွားအိုက ရေကို ဖြေးဖြေးလေး မော့သောက်ပါတယ်။ အဖွား ရေသောက်နေ တုန်းမှာ အဖိုးအိုက အိတ်ထဲက နောက်ထပ် ပစ္စည်းလေး တစ်ခုကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြန်တယ်.. သူ့လက်ထဲ ပါလာတာက လက်ကိုင် ပုဝါလေး တစ်ထည်။ အဲဒီ လက်ကိုင်ပုဝါလေးနဲ့ ချွေးစို့နေတဲ့ အဖွားရဲ့ နဖူးနဲ့ လည်ပင်းတို့ကို သာသာဖွဖွလေး သုတ်ပေးနေပါတယ်။ “အိုး သိပ်ကို ရိုမန်တစ်ဆန်လှတဲ့ ကြည်နူးဖွယ် မြင်ကွင်းကလေး ပါဘဲလား” သေချာတာ ကတော့ အဲဒီမြင်ကွင်းကို ကြည့်နေမိတဲ့ သက်ထားရဲ့ မျက်နှာဟာ ကြည်နူးမှုတွေနဲ့ ပြုံးနေမိလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အဖိုးကိုကြည့်ရတာ သူ့အပြုအမူတွေအတွက် ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်ဟန် ဘာမှ မတွေ့ရသလို ဒီလို လုပ်ပေးနေတာ ဟာလည်း သူ့အတွက် ဘာမှမထူးဆန်းသလို အမြဲလုပ်နေကျ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့။ သက်တောင့် သက်သာ စေတနာ မေတ္တာအပြည့်နဲ့ပါဘဲ။ အဖွားအိုကရော.. သူ့မျက်နှာပေါ်လည်း အဖိုးကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်း၊ အားကိုးယုံကြည်ခြင်းတွေအပြည့်နဲ့ အဖိုးခုလို လုပ်ပေးနေတာကို ကြည်နူးနှစ်သက်နေတဲ့ အပြုံးကလေးနဲ့အတူ မျက်နှာလေးက အသက်အရွယ်ကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်နေပေမဲ့လို့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင့် ရွှန်းစို လင်းလက်လို့ပါဘဲ။ သူတို့ နှစ်ဦးကိုကြည့်ပြီး သက်ထားရင်ထဲက သောက တို့ကိုတောင် ခဏမေ့သွားတယ်လို့ ထင်မိတော့တယ်။
ရေသောက်ပြီး ရေဘူးလေးကို အဖိုးကိုပြန်ပေးလိုက်တဲ့ အဖွားဟာ လက်ကိုင်ပုဝါကို ပြန်ဆွဲယူလို့ အဖိုးအိုကို ယုယ ကြင်နာစွာနဲ့ တစ်လှည့် ပြန်သုတ်ပေးနေပါတယ်.. ပြီးသွားတော့မှ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေတဲ့ သက်ထား ဘက်ကို လှည့်ကြည့်ပြီး “သမီးက တစ်ယောက်တည်းလား.. အဖော်မပါဘူးလား” လို့ မေးလာပါတယ်။ သက်ထားလဲ “အဖိုးနဲ့ အဖွားတို့လို ပျော်စရာ အဖော် မရှိဘူးလေ” လို့ ရယ်ရွှင်ပြပြနဲ့ နောက်တောက်တောက်လေး လုပ်ကာ ပြန်ဖြေလိုက် ပါတယ်။ သူတို့ ၂ယောက်ကို ကြည့်ပြီး သက်ထားစိတ်ထဲမှာ ရင်းရင်းနှီးနှီးကို ခံစားနေ မိပြီး အလိုလို ရွှင်မြုးနေတဲ့ စိတ်ကလေး ဖြစ်နေခဲ့မိ တာကြောင့်ပါ။ အဖိုးအဖွားတို့က သက်ထားရဲ့စကားကို ခပ်ဟက်ဟက်လေး ရယ်မော လိုက်ကြပါတယ်။ ချစ်ဖို့ တကယ်ကို ကောင်းတဲ့ အဖိုးအဖွား စုံတွဲပါဘဲ။ အဖိုးနဲ့အဖွားကို ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲကနေ မေးခွန်းလေးတွေ မေးကြည့်ချင်လာတာကြောင့် စကားစလိုက်မိပါပြီ..
“အဖွားတို့ကို ကြည့်ရတာ အရမ်းကြည်နူးစရာ၊ အားကျစရာကောင်းတယ်နော်.. အိမ်ထောင်သက် ဘယ်လောက် ကြာပြီလဲဟင်”
သက်ထားရဲ့အမေးကို အဖွားက ပြုံးပြုံးကလေးနဲ့ “အဖွားတို့က ငယ်လင်ငယ်မယားတွေ သမီးရဲ့ .. အဖွား ၁၈နှစ် သမီးရဲ့အဖိုး အသက် ၂၂မှာ အိမ်ထောင်ကျတာ ဆိုတော့ အခု အဖွားက ၇၈၊ အင်း နှစ် ၆၀ရှိပြီပေါ့သမီးရယ်.. ” လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်..
“သားသမီးတွေရော ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ” လို့မေးပြန်တော့ “သား၂ယောက် သမီး၎ယောက်ရှိတယ် သမီးရေ.. အားလုံး အိမ်ထောင်ကျလို့ အဖွားတို့မှာ မြေးတွေချည်း ၂၀ကျော်နေပြီ… အဲ မြစ်တွေတောင် တစ်ချို့ အိမ်ထောင် ကျသူ ကျနေပြီလေ” လို့ပြန်ပြောပါတယ်။ အဖွားရဲ့အသံက အရမ်းကို နူးညံ့ သိမ်မွေ့တာပါဘဲ.. လေသံလေးကလဲ ချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့။ ကြည့်ရတာ သူ့တစ်သက်မှာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း စကားတို့ကိုပင် ဆိုခဲ့ဖူးပုံမပေါ်ပါ..
“အဖွားတို့ကြည့်ရတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ခင်ကြတာဘဲနော်.. အဖွားတို့ အိမ်ထောင်သက်မှာ ရန်တစ်ခါမှ မဖြစ်ဖူးဘူးလား” လို့ မေးမိတော့ အဖိုးက ပြန်ဖြေပါတယ်.. “အဖွားက စိတ်ကောင်းတယ် သမီးရဲ့။ အဖိုးက လူငယ် ဘဝတုန်းကတော့ စိတ်ဆတ်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဖိုးစိတ်ဆိုးမယ်ပြင်ရင် သူက အရင် အလျှော့ပေးလိုက်တော့ ဘယ်တော့မှ ရန်ဖြစ်တဲ့အဆင့်ကို မရောက်ပါဘူးကွယ်။ လူနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က တင်းရင် တစ်ယောက်က အလျော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် ပြီးသွားတာဘဲ မဟုတ်လား သမီးရယ် ”
“သူကလဲ အဖွားအပေါ် ညှာတာတာကိုးသမီးရဲ့။ အဖွားကို အော်ဟစ်ဆူပူတာမျိုး မဖြစ်ခဲ့ဖူးတော့လည်း ရန်ဖြစ်တယ် ဆိုတာလည်း ဘယ်ရှိတော့မှာလဲ။ အဓိက ကတော့ နားလည်မှုပေါ့သမီးရယ်.. အဖိုးက အဖွားအပေါ် အမြဲတမ်း နားလည်မှုပေးခဲ့တယ်.. အိမ်ထောင်ဦးစီး ပီပီသသနဲ့ အဖွားကို ငဲ့ညှာတယ်။ ကြင်နာတယ်လေ။. အဖွားတို့ မိန်းမတွေရဲ့ စိတ်က ကိုယ့်ယောက်ျားကို အားကိုးတွယ်တာ တတ်တဲ့ စိတ်မျိုး ရှိတယ် မဟုတ်လား။ ယောက်ျားလုပ်သူက ကောင်းနေရင် မိန်းမတွေကလဲ အိမ်ထောင်ရှင်မ ကောင်း ပီသဖို့ ဘယ် ဝန်လေးတော့မလဲ သမီးရယ်… ကိုယ်ချစ်လို့ ထူထောင်ထားတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို တစ်သက်လုံး ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် အေးအေး ချမ်းချမ်းနဲ့ ရိုးမြေကျတဲ့အထိ ဖြတ်သန်းချင်တာလေ.. သမီးအဖိုးကလဲ ဒီလို စိတ်မျိုးဘဲရှိပါတယ်.. ဒီတော့ အဖွားတို့က မချမ်းသာပေမဲ့ ဘ၀ကို နားလည်မှုလေးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ကြတော့ စိတ်အေးချမ်းတယ် သမီးရဲ့” အဖွားရဲ့ လေသံ အေးအေးလေးက သူ့ရဲ့စိတ်လေးလိုပါဘဲ အေးချမ်းလိုက်တာ သူတို့ပြောတဲ့ စကားတွေဟာ အမှန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာ မရှိလောက်အောင် သက်ထား ရင်ထဲက ယုံကြည်မိ ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ စိတ်သဏ္ဍာန်တွေက သူတို့ရဲ့ အပြုအမူ ပေါ်မှာတင်မက မျက်နှာပေါ်မှာပါ ဖော်ပြနေ သားဘဲလေ။
“အဖွားတို့အိမ်ထောင်ရေးက သိပ်စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းတာဘဲနော် .. နှစ်ယောက်လုံးက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ သဘောလည်း ကောင်းလို့လေ။ အဖိုးရဲ့ နားလည်မှုကို ရထားတဲ့ အဖွားက ကံကောင်းသလို အလျှော့ပေးတတ်တဲ့ အဖွားကို ရတာလဲ အဖိုး ကံကောင်းတာပါဘဲနော် ”
သက်ထားက ပြောလိုက်တော့ အဖွားက သက်ထားကို ရင်းနှီးခင်မင်စိတ်ကြောင့် ထင်ပါရဲ့.. မေးခွန်းလေး တစ်ခု ပြန်မေး ပါတယ်.. “ဒီလိုဆို သမီးကရော သမီးရရှိထားတဲ့အချစ်က ဘယ်လို အချစ်မျိုးလဲ.. နားလည်မှုပေးတဲ့ အချစ်လား။ အလျှော့ပေးတဲ့ အချစ်မျိုးလား၊ အဲဒီအချစ်မှာ သမီးကိုယ်တိုင်ကရော စိတ်ချမ်းမြေ့မှု ရရဲ့လား” တဲ့
သူမ ကသာ မေးခွန်းတွေ တောက်လျှောက် မေးလာခဲ့ပေမဲ့ ရုတ်တရက် ပြန်မေးလိုက်တဲ့ အဖွားရဲ့ မေးခွန်းမှာ သက်ထားရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေဟာ ဆွံ့အလို့ သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ဖြေစရာ စကား ရှာမရတာနဲ့ဘဲ ခပ်ပြုံးပြုံးလေးသာ လုပ်နေ လိုက်မိပါတော့တယ်၊ တကယ်တမ်းတော့ အဖွားရဲ့ မေးခွန်းကို သက်ထား သိပ်ဖြေချင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြေချင်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေ ဟာလည်း “ သမီး ရရှိထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမှာ စိတ်ချမ်းမြေ့ပါ တယ်။ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ပါတယ်” လို့ ဖြေချင်ခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲက တကယ်တမ်း တီးတိုးလေး ပြောနေမိတာက “သမီးလဲ အဖွားလို ကံကောင်းချင် ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမှာ သာယာ ချမ်းမြေ့ချင်တာပါဘဲ အဖွားရယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖွားလို ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး”
အကြာကြီး တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့ သက်ထားကိုကြည့်ပြီး အဖိုးက “ကဲ... သမီးရေ.. မမှောင်ခင် အဖိုးတို့ ပြန်လိုက်ဦးမယ်.. ညနေတိုင်း အဖိုးတို့က လမ်း လာလာလျှောက် တယ်လေ.. ဟိုးနားလေးက အိမ်မှာနေတယ် သမီးရေ။ ရောက်ရင် ဝင်လာလည်နော်.. သမီးအဖွားက ခုချိန်ထိ အဖိုးကို ဟင်းချက်ကျွေးတုန်း.. သူက ဟင်းချက် သိပ်ကောင်းတာသမီးရဲ့။ လာလည်ရင် သမီးကို အဖွားလက်ရာနဲ့ ထမင်းကျွေးမယ်နော်။” လို့ ပြောလိုက်ရင်း တောင်ဝှေးကိုကောက်လို့ အရင် ထလိုက်ပြီး လက်ကလေးတစ်ဖက်ကို ကမ်းလိုက်ကာ အဖွား ထနိုင်အောင် ကြင်ကြင် နာနာလေး တွဲထူ လိုက်ပါတယ်။ အတွဲခံရတဲ့ အဖွားရဲ့ လက်ကလေးတွေကလည်း အဖိုးရဲ့ လက်တွေကို အားကိုးတကြီး ဆုပ်ကိုင်လို့။
“သမီးလဲ တစ်ယောက်တည်း ဆိုတော့ မမှောင်ခင်ပြန်နော်.. အကြာကြီး မထိုင်နဲ့။ မြစ်ဘက်ကနေ လာတဲ့ လေက အေးတော့ အအေးမိနေဦးမယ်.. နောက်ကို ဟိုနားဘက်ရောက်ဖြစ်ရင် အဖွားတို့ဆီလဲ လာလည်နော်” လို့ လေသံ ချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့ အဖွားက သက်ထားကို သံယောဇဉ် ကြီးတတ်စွာ ဝင်ပြောလိုက် ပါတယ်။
တစ်ယောက်လက် တစ်ယောက်တွဲပြီး တစ်ရွေ့ရွေ့ ဝေးကွာသွားတဲ့ အဖိုးနဲ့ အဖွားကိုကြည့်ပြီး ခံစားချက် တစ်မျိုးကြောင့် မျက်ရည်စတစ်ချို့တို့က သက်ထားရဲ့ မျက်ဝန်းအိမ်မှာ ရစ်ဝဲ လာမိပါတယ်။ ကြည်နူးမှုကြောင့် ကျတဲ့ မျက်ရည်လား။ ဘယ်လို ခံစားချက်ကြောင့် ကျတဲ့ မျက်ရည်လဲ ဆိုတာကိုတော့ သက်ထား ကိုယ်တိုင်တောင် ဝေခွဲဖို့ ခက်နေမိပါတယ်။ နားလည်စာနာမှု၊ အလျှော့ပေးသိတတ်မှု၊ ချစ်ခင် ကြင်နာမှုစတဲ့ အရာတွေနဲ့ လှလှပပ ယှက်ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖိုးအိုနဲ့ အဖွားအိုတို့ရဲ့ လေးစားအားကျဖွယ် တူညီသော ချစ်ခြင်း မျိုးကိုတော့ မက်မက်မောမော လိုချင်ခဲ့မိသော်လည်း သက်ထားဟာ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အဖွားလို ကံကောင်းသူ တစ်ယောက် မဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ကိုတော့ဖြင့် အဖိုးအဖွားတို့ကို ပြောမပြချင်တော့ပါ။ အချစ်ဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စာနာ နားလည်မှု၊ ဖေးမ ကူညီမှု၊ မြတ်နိုး တွယ်တာမှု၊ လေးစား ချစ်ခင်မှုတွေနဲ့ တည်ဆောက် ထားကြမယ်ဆိုရင် သာယာ လှပတဲ့ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ဖွယ် ချစ်ခြင်းတစ်စုံ ဖြစ်လာမှာတော့ သေချာသားဘဲ မဟုတ်ပါ လားနော်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးပါ။ စာရေးဖို့ အချိန်မရသေးတာနဲ့ ဒီနေ့တော့ ဒီပိုစ့်လေးကို ပြန်တင် မိပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက် တူညီသော ချစ်ခြင်းများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြ ပါစေရှင်။